Muxuu Ding farriimaha Trump ugu turjumaa luqadda Shiinaha? - BBC News Somali
Muxuu Ding farriimaha Trump ugu turjumaa luqadda Shiinaha?
Bar Twitter-ka ah oo uu leeyahay nin u dhashay Shiinaha oo ku nool Mareykanka, wuxuu ku baahiyaa dhammaan farriimaha Trump oo afka Shiinaha uu ku turjumo. Wuxuu leeyahay in ka badan 100,000 oo taageerayaal ah, kuwaas oo badankoodu Trump u arkaan inuu yahay "qof u ololeeya xuquuqda aadanaha".
Dhammaantood waxay taageersan yihiin Donald Trump, waxayna si adag u dhalleeceeyaan dowladda Shiinaha. Waxay doonayaan in "farriimaha Trump ay gaarsiiyaan dadka afka Shiinaha ku hadla ee caalamka oo dhan", sida uu Ding sheegay.
Raggan oo sidoo kale farriimaha dowladda Shiinaha ku turjuma English-ka, wuxuu u jeedadoodu yahay in "asxaabtooda ay ka caawiyaan fahanka dowladnimada iyadoo loo marayo farriimaha Trump".
"Ujeedadeenu waxay tahay inaan u adeegno shacabka Shiinaha ee daafaha caalamka, gaar ahaan kuwa dalka ku sugan ee awoodda u leh in ay VPN isticmaalaan si ay xeydaabka baraha bulshada ee dowladda uga dul boodaan", ayuu yiri Ding.
Trump oo Xi ugu baaqay "in uu dadaal badan galiyo" arrinta Kuuriyada Waqooyi
Dadka magaalooyiinka ku nool qaarkood ayaa isticmaala VPNs - xiriirka dalxiiska gaarka ah - kaas oo kumbuyuutarka ka gudbinaya xeyndaabka dowladda una suuragelinaya in Twitter-ka ay isticmaalaan. Balse way adag tahay in la qiyaaso tirada dadka isticmaala ee Shiinaha ku nool.
Ding ayaa sheegay in "waxa ugu weyn ee ku dhiiragelinaya in uu howshan sii wado ay tahay in uu rumeysan yahay in Trump uu yahay madaxweynaha keliya ee sida weyn u taageera xuquuqda aadanaha ee Shiinaha ee taariikhda Mareykanka soo mara".
Waxay isaga la tahay in dagaalka Trump ee ka dhanka ah ganacsiga Shiinaha uu cadaadis ku noqonayo koboca dhaqaalaha, taasna ay sababeyso dhaqaale xumo. "Waxay caqabad ku noqoneysaa Xisbiga Shuuciga ah ee CCP waxayna ku hoggaamineysaa burbur".
Tan iyo bilowgii ololihiisa, Trump wuxuu "Shiinaha" u adeegsaday kicinta taageerayaashiisa.
"Ma ogolaan karno in Shiinaha uu sii wado kufsiga dalkeena, taas waa waxa ay inagu hayaan hadda," ayuu Trump si joogto ah ugu celceliyay xilligii ololaha.
Trump oo ka yaabiyay madaxweynaha Finland
Dadka afka Shiinaha ku hadla ee Twitter-ka isticmaala ayaa si farxad leh u soo dhoweeyay arrintaas iyagoo ra'yigooda ku qorayay @Trump_Chinese. "Shaqo wanaagsan! fadlan intaa ka sii adkee!" Go'aan sax ah oo caqliyeysan!"
Qof ayaa tallaabadaas ku tilmaamay "mid alle keenay" in dowladda Shiinaha laga adkaado. Mid kale ayaa sheegay inuu rajeynayo in Trump markale la soo doorto isagoo "caafimaad qaba".
Madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Shiinaha oo maanta kulmaya